Shirkadaha isgaadhsiintu waa ganacsiga koowaad ee hogaamiya ama ugu dakhliga badan caalamka, | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Shirkadaha isgaadhsiintu waa ganacsiga koowaad ee hogaamiya ama ugu dakhliga badan caalamka,
Shirkadaha isgaadhsiintu waa ganacsiga koowaad ee hogaamiya ama ugu dakhliga badan caalamka,
Shirkadaha isgaadhsiintu waa ganacsiga koowaad ee hogaamiya ama ugu dakhliga badan caalamka, Somaliland-na maanta Telesom iyada ayaa hogaamisa shirkadaha isgaadhsiinta uguna dakhli badan, waanan ku hambalyaynayaa, horumarkaa ay gaadhay muddadaa gaaban ku gaadhay.
Dalka Soomaaliyada waxaa hogaamisa shirkadaha isgaadhsiinta shirkada Hormood ee caanka ah, mulkiilaheeduna yahay Sheekh Axmed Jimacaale, waana shirkada ugu samo-falka badan leh shirkadaha ka dhisan Soomaaliya. Sheekh Axmed Jimcaale sidoo kale waxa uu leeyahay saamiga ugu badan shirkada Telesom Somaliland, wax samo-fal ah oo uu u qabto Somaliland-na mar naba maan maqal, markii ay Soomaaliya ololaysay ee aanay jirin shirkada Hormood, waxaa uu ka hodmay dhaqaalaha ka soo gala dalka Somaliland, kaas oo uu ku dhisay shirkada Hormood. Malaha Sheekhu waxa uu qaatay, Yaa mufaraqal maraq, ahlu baytag musta xaq.
Shirkada Dahabshiil Group, oo ah shirkad asal ahaan laga leeyahay Somaliland, waxa ay ganacsi ballaadhan ku leedahay dalka Soomaaliya, samo-falka ugu ballaadhana waxa ay ku bixisaa Soomaaliya, oo dhibaatooyin joogto ahi ay ku habsadeen, waanan ku hambalyaynayaa oo kama xumi in shirkada Dahabshiil ay ummada Soomaaliyeed dib ugu celiso faa’iidada ay ka hesho.
Wxaad mooddaa in dawladdu in ay aad uga habranayso si ay cashuurteeda uga qadato shirkadaha isgaadhsiinta laakiin shicibku cidna uma habanayo waxaana looga fadhiyaa in mashaariic horumarineed iyo wershado waxsoosaar ay dalka ka hir galiyaan oo ay shaqo abuur u sameeyaan dadka isla markaana ay saamiyo furaan uu dadku kaga qayb qaato halka ay kaga wareegayaan hudheelo ay iyagu gaar u leeyihiin oo ay furtaan taasoo sababtay in dalkii oo dhami uu wada hudheel noqday.
Hadaba waxaan leeyahay Dahabshiil intuu jiray waa la ogyahay sida uu dadka u gacan qabto iyo waxtarkiisana waa la wada arkay markaa waxaan leeyahay maalqabeenada kale ee la midka ahna ku dayda oo idinkoo cashuurta bixinaya dadkana wax tara waxaanad ogaataan in qof kastaaba waxa uu la boxo ee uu dalkiisa iyo dadkiisa taro ayuu ILLAAHAY cawil naq u siiyaa oo uu ugu gargaaraa.
Haddaba , waxaan qormadan ku soo gabagabaynayaa tix gabay ah, oo uu curiyay abwaan Soomaaliyeed.
Bawdada markii aan ka jabay. biixiyaha lawga, raggii buurta dheer igala baxay, beerka ka ogsooni, bah heblaayo baantay waday beerka ka ogsooni, bah heblaayo bagaday lahayd beerka ka ogsooni, haddiise biixiyaha eebahay, kay isugu bego, abaal badha, abaal bura, abaal bad iyo dheeraad ah, midba kaan anigu ugu bedeli, beerka beerka ka ogsooni. Berri dheer ninkii iga jiray, soona bixiwaayay, inaan bogsado uun jeclaa, beerka ka ogsooni
Axmed Maxamed Cabdilaahi
Previous articleSiilaanyo wuxuu cadaystay in uu Xoog iyo Xeelad dalka iyo dadkaba ku haysto maadaama uu digreeto ku cayimi waayey waqtigii doorashooyinka la qaban lahaa.Bal u fiirsada fadeexadahan hoose!. Qalinkii A/rahman fidhinle UK‏
Next articledaayaca shoqo ee wasaarada maliyada iyo jaahwareerka ka taagan kastamka berbera q/w saleebaan maxamed c/laahi